सिस्को I- पुरस्कार Telepreferences: मे6| Martech Zone
सिस्को I-Prige Telepreferences: मे 6th
बिहीबार, अप्रिल 17, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मिति हाम्रो लागि सेट गरिएको छ अन्तिम सिस्को I-पुरस्कार प्रस्तुति। म पहिले नै नर्भस छु। हामीले सोचेका थियौं कि हामीले शिकागो वा सिन्सिनाटी जानु पर्ने थियो, तर हामीले पछिल्लो रात फेला पार्यौं कि त्यहाँ टेलीप्रिसेंस सही कर्मेल मा स्थान!
टेक्नोलोजीले हाई-डेफिनेशन र सिस्कोको नेटवर्कलाई सहभागीहरूलाई स्ट्रिम गर्न प्रयोग गर्दछ जस्तो कि तपाईं एकै कोठामा ठीक हुनुहुन्छ। टेलिप्रेसेन्स बैठकहरूले सिस्कोको लागि एक अरब डलर भन्दा बढी आम्दानी उत्पन्न गर्दछ! यो जस्तो गीकको लागि गाह्रो हुन गइरहेको छ प्रविधिमा गगा जान र बैठकमा अगाडि बढ्न।
को लागी क्लिक गर्नुहोस् वाणिज्यिक के Telepreferences देखाउँदै छ मँ आशा गर्दछु कि हाम्रो बैठकमा धेरै उत्साहित छ। 🙂
तपाईंको WordPress साइटमा बाह्य फिडहरू प्रकाशित गर्नुहोस्
म आज बार्नेस र नोबलहरूमा गइरहेको छैन!